Kugadzirisa Gnome: Iyo SolusOS Nautilus Patch | Kubva kuLinux
Ini ndichangobva kuburitsa chinyorwa nezve chikanganiso chikuru icho mumaonero angu chawakaita Gnome nekubvisa dzimwe sarudzo kubva Nautilus, uye maminetsi mashoma apfuura mu SolusOS Blog, chinyorwa chakabuda chingaite kunyemwerera kanopfuura kamwe.
Como Ini ndanga ndataura pane yangu yapfuura kutumira, Ikey kudzidzisa Ini ndanga ndichishanda pane chigamba che Nautilus uye isu tave kutoona mhedzisiro. Ichi chigamba chinodzosera mamwe mabhatani aimbove aripo mune ino faira maneja uye kwete izvo chete, asi zvinotsiva miseve ye Kumashure / Mberi pamberi pekufambisa bar (chimwe chinhu icho vazhinji vaichemera), sezviri kuonekwa mumifananidzo inotevera:
Chinangwa chavanoteedzera mukati SolusOS, ndeyekuti shanduko kubva pavhezheni 1.1 kuenda kushanduro yechipiri haina kukurumidza kudaro. At chinyorwa chepakutanga Zvimwe zvinoshandurwa zvinokurukurwa izvo zvishoma nezvishoma zvichawedzerwa kune Nautilus uye kuti vazhinji, vashandisi vazhinji vari kuenda kuzotenda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Kugadzirisa Gnome: Iyo SolusOS Nautilus Patch
SolusOS inonzwisisika. Gnome 3 tekinoroji asi hapana zvigadzirwa zvisina kujairika. Iyo inovandudza zviripo uye inodzosera kune vashandisi sarudzo dzinoshanda, kunyangwe izvo zvasarudzo zvakavanzwa nekutadza. Ini ndinofunga ndiri kuzonyatsoteedzera iyi nyowani distro, nekuti ndiri pakati pekutsvaga yakanaka GTK3 nharaunda, kusanganisa neyangu anodikanwa KDE.
wow yakanakisa info, iwe unogona kutaura kuti ivo SolusOS xD vagadziri vari kuita basa rakanaka
kuombera kuti vashoma vanoita izvo zvinoita sekunge vazhinji havachadi.
Chaizvo !! Nei ini ndichida kugona uye nekumhanyisa iyo iyo mbiri mapaneru sarudzo yaakandipa kana ndichimanikidza F3 .. ??
Chaizvoizvo, isu tese tinoda kuti Nautilus irambe ichiwedzera kusabatsira pamabasa ezuva nezuva.
Ini ndinotaura zvakare chii mune yapfuura posvo: SAVE MWARI IKEY !!
Kutenda nekushushikana nezve "vashoma" vasina touch skrini, matafura, uye vanoda Anoshanda Gnome !!
Wake uyu Murume weSolysIS anoenderera seizvi, iyi OS iri kuzokwira sefuro ...
Manuel Escudero akadaro
Iyo miseve uye kumwe kushanda kwekufambisa kuchiri muGNOME / Nautilus uye hapana chigamba chinodiwa kuti uve navo, ivo vari "vakavanzwa" uye vasingazivikanwe nemirairo inotevera:
gsettings seti org.gnome.nautilus.preferences nguva dzose-shandisa-nzvimbo-yekupinda ichokwadi
izvo zvakafanana nekumisikidza iyo boolean neGconf-Edhiyo
Pindura Manuel Escudero
Hongu, asi zviri nyore kutaura kuti wemasimbaose soluos akazvigadzirisa. Ini ndinofungidzira kuti zvinofanirwa kuve nyore kuisa solusos pane kutarisa muforamu kuvaratidza zvakare.
Uye ini ndakanga ndatama kubva muylinux nekuda kwekunyanyisa asi zvinozoitika kuti kune zvekare kuno.
Kutenda nezano Manuel. Zvisinei, ndinoona kuti havana kuzvitarisa nekuti pane zvakazotaurwa zvichiti kushamisika kwe "chigamba"
Dambudziko nderekuti zvakaitwa naIkey (chigamba) ini ndinopokana zvakanyanya kuti vachakudzidzisa kuzviita muforamu. Zvisinei, ini ndinokukoka iwe kuti uone kana iwe ukawana chimwe chinhu nezvazvo, nekuti izvozvi ini ndini ndinogona kutaura, kuti zviri nyore kutaura nezve chimwe chinhu chingangoitika, pane kubvuma chimwe chinhu chatove chokwadi.
Kungoziva, iwe une chimwe chinhu chinopesana SolusOS? Nekuti kutanga, ini handioni chero munhu anonyanyisa akatenderedza pano (kunze kwekambani yeYoyo) 🙂 uye komendi yako inoratidza kumwe kusada kuenda kudistro.
Uye hapana shamwari, haufanire kuisa SolusOS, nekungova ne Kuedzwa kweDebian zvakwana, iwe unowedzera izvo zvinyorwa zve SolusOS uye ndizvozvo
Imwezve tsananguro, iro zano rakapihwa naManuel rinonakidza kwazvo, asi harina basa rakafanana nechirakiti (icho zvinonzwisisika chinosanganisira zvimwe zvinhu zvakawanda), izvo parizvino zvinongoratidza zvimwe zvakavanzika, asi gare gare pazviri zvichave nezvimwe zvakawanda zvinoshanda .
Chekupedzisira, kana ndikabvuma pamberi pevanhu, kuburikidza neiyi blog, kuti ndinoyemura basa ravari kuita naSolusOS, zvinondiita munhu anonyanyisa, nekuti ndizvo zvandiri
Zvakanaka, zvinoratidza kuti iwe unobva muylinux.
Asi zvinhu izvi ndizvo zvinondinetsa. Kune mushandisi mutsva, kana nenzira diki muLinux, shanduko idzi hadzizivikanwe, saka sei uchivaita kuti vapfuure nemambure, vachitsvaga maitiro ekugadzirisa chimwe chinhu chakadai, kana chichiuya nekumira? Uye ini handizvirumbidze nezve ruzivo rwangu rweLinux, asi ini ndinotarisira kuti handifanire kutendeukira kune aya marudzi eshanduko kuti ndive neyakajeka desktop.
Iyi hurukuro inondiyeuchidza nezvekukakavadzana kwakamuka apo timu yeMandriva, ichitsvaga kurerutsa Dolphin (hutsinye), izvo zvavakawana kwaive kutemesa akadaro maneja, kubvisa sarudzo, nekuvanza vamwe uko, mushandisi asina ruzivo, zvaisazowanikwa zviri nyore.
Mwari chengetedza iyo SolusOS, Mwari chengetedza iyo Ikey ...
Ameni !! hehe ..
Ivan Bethencourt akadaro
Pindura kuna Iván Bethencourt
Tariro Clem nechikwata chake vanosanganisira chigamba ichi muCinnamon.
Kutendeseka, ndinofunga uyu ndiwo mubvunzo wezera, pfungwa dzakura dzinomira uye dzinoomarara kana vachiona shanduko, sekufunga kwangu mu fedora 17 ine nautilus 3.4.2 Ini handina kana dambudziko rekugadzirisa uye kuti ndiri mushandisi nyowani ndanga ndichingoshandisa linux kweanenge makore matatu, asi shanduko mugnome dzakakosha uye idzo nyowani, pamwe vamwe vevakarwa muhondo havazvifarire asi izvo zvitsva zvinokwezva kutarisisa kwakawanda: D.
zvirinani uti: Offtopic
zvakanaka kune ikey !!
Ndinovimba vanozviisa muCinnamon
Fernando Monroy akadaro
Nguva zhinji ini handinzwisise kuti nei mapurojekiti makuru ari kuita zvikanganiso zvakawanda uye pachinzvimbo chekuwana rutsigiro renharaunda ivo vari kuirasa. SolusOS iri munzira chaiyo +1.
Pindura Fernando Monroy
Iyo yekumashure nekunze mashandiro agara achingo shandura mativi, nhasi iri mukona yepamusoro yekurudyi
GWoffice: kubatanidza Google Docs muUbuntu